Miyeey kooxda Chelsea ka laabatay go’aankii ay ku fasixi laheyd Maurizio Sarri?? – Gool FM
(England) 12 June 2019. Chelsea ayaa go’aansatay inay ka laabato go’aankeedii ku aadanaa inay fasaxdo macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri xagaagan.
Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa waxay tilmaamayaan in maamulka kooxda reer London ee Blues ay isku dayi doonaan in Sarri ay ku qanciyaan sii joogitaanka garoonka Stamford Bridge xilli ciyaareedka soo socda.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Chelsea ay isku dayeyso inay ku qanciso Maurizio Sarri inuu baaqi ku sii ahaado kooxda Blues, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu wada hadalo kula jiro naadiga Juventus, si uu u noqdo badalka Massimiliano Allegri.
Isku dayga ay maamulka Chelsea ku doonayaan in Maurizio Sarri uu sii joogo garoonka Stamford Bridge ayaa wuxuu imaanayaa, kaddib markii ay booska saddexaad kaga dhameysteen dhanka kala sareynta Premier League xili ciyaareedka 2018-2019, isla markaana ay ku guuleysteen koobka UEFA Europa League.
Yeelkadeeda, wargeysyada Ingriiska iyo Talyaaniga ayaa ka hadlay saacadihii lasoo dhaafay magacyada dhowr musharax ee lala xiriirinayo shaqada tababarja ee kooxda Chelsea, waxaana hogaaminaya tababarayaasha Rafael Benítez iyo Jose Mourinho.